United Living Mall hasadedicated management team and talented teams of more than 400 staffs who have experience in new retail concepts and experiences.Day to Day is the supermarket run by the United Living Mall's management team that offers everything as the 'Its all available here.' It is committed to providing customers with the fresh... est produces and the possible services. As the 'We don't sell cheap things but we sell things cheap', we promise we offer the best price in town.
• အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး သန့်ရှင်းမှု ဖြင့်သွက်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
• ပညာအရည်အချင်း အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
• အသက် ၁၈-၂၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
• အလုပ်တာဝန်အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီး attitude ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
• ရေရှည်လက်တွဲ လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
• Customer Service ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
48, Kyaikasan Road, Tarmway Township, Yangon
Job Function: Sale & Waiter
PEB Steel Myanmar Negotiable
Marketing Officer (Skin Care Product)